कर्मनिष्ठ बन ,सत्कर्म गर – Himalitimes
| प्रकाशित मितिः सोमवार, कार्तिक १८, २०७६
कर्मनिष्ठ अभियान लिएर काठमाडौंबाट कुरिनटार हुँदै , मनकामना दर्शन ,गोरखा तथा लमजुङको कार्यक्रम सिद्वाउँदै पोखरा पुगियो । पोखरामा कार्यक्रम सिमीत थियो तर युवराज पारसलाई पोखराको मनमोहक तथा आकर्षक दृश्य तथा सुन्दरताले अति मनम‍ोहित पार्छ र त केहि दिन छुट्टि अब भन्दै पोखराको आनन्दमा भुल्न थाले । हामी पनि अभियानलाई थाँति राखि साँच्चिकै छुट्टि मनाउने तर्खरमा लाग्यौं । कोहि काठमाडौं फर्के , कोहि कता लागे भने म र बीनय गौतम भाइ लेक साईडको दिनचर्चाले मात्र हद्दु हुन थाल्यौं ……..
सञ्जय दत्तको बायोपिकमा सञ्जु भन्ने हिन्दी सिनेमा रिलीज भएकोले हेर्न जाने र पारस सरकारलाई पनि साथमा लाने निधो गर्यौं । मैले सरकार सञ्जु लागेको रहेछ हेर्न जाउँ भनी प्रस्ताव राखें । के हेर्छौ सञ्जु मलाई हेरे पुग्दैन ? भन्ने उत्तर नै गम्भीर खाले थियो । हुन पनि हामी टिनेज हुँदा युवराज पारसलाई सञ्नय दत्त भन्ने गर्थ्यौं । अर्को डिट्टो सञ्जय दत्त जस्तो परम मित्र तथा भाइ दिवंगत आईजि साहेव रत्न शमसेर जवराको छोरा बिनय शमसेर थियो । बिनयको क्यारेक्टरमा झझल्को आउँथ्यो ,उनको गेटअप,हिंडाई र कपालले गर्दा सञ्जय दत्त जस्तै लाग्थ्यो ।
बितेको बाल्यकालको सम्झना कहिले नमेट्टिने गरि ताजै छोडेर विनय अस्ताईसके । हामी सञ्जु हेर्न गयौं ,विनय गौतमले दाइ न्याप्किन राखौं है धेरै रूवाउँछ भन्दा भावुक मान्छे मैले पनि न्याप्किन राखेँ । सञ्जु हेर्दा म धेरै चोटि हिक्क हिक्क गर्दै रोएँ । विनय भाइ पनि रोईरहेको आभास पाएको थिएँ ।सञ्जय दत्त र युवराज पारसको भावुकता नै दुवै व्यक्तिको लागि घातक भयो । दुवै बच्चादेखि नै आमा बुवाबाट टाढा रहि होस्टेलमा बस्नु बच्चाको कलिलो मानसिकताले परिस्थितिलाई लिन नसक्नु हो । कलिलो मानसिकता, चञ्चले व्यवहार ,उरन्ठाउले दिमाग ,निर्दोष व्यबहारले गर्दा अरूले दरिलो फाईदा उठाए । साथीभाइ संगतले पनि सञ्जय दत्तले आफु बिग्रेको भनि स्विकारे ।
बुढानिलकण्ठ स्कुलमा युवराज पारसले गरेको उरण्ठ्याउले कृयाकलापले टिचर र दरबार आजित भएका थिए भन्छन् । उनले मान्छेको आची झैं देखिने खेल्ने कुरा ल्याएर क्लास टिचरको कुर्सिमा राख्दिएको र स्कुलमा मानिसको आच्ची सम्झि हंगामा भई दोषको भागिदार चाहिँ मिल्ने साथी भएछ । चक्लेटी टाईपको हिर‍ो ।,अर्को लज्जालु र बोल्दा मुण्ट‍ो तल राख्ने र मिल्ने साथीहरूको लागि दिलो ज्यान दिन तत्पर र हँसिमजाक टाईपका भएका कारण स्कुल जिवनमा साथीभाइले उनलाई औधी मन पराउँथे । उनी राज परिवारसँग मात्रै नगाँसिएको भए कुनै राम्रै फिल्म ईण्डस्ट्रीमा हिरो भएर जम्ने खाले व्यक्तित्व ।
सञ्जयले जेल यापन पछिको जीवनलाई नयाँ जीवन भन्न रूचाउँछन् । जहाँ उनको लगाव धर्म प्रति भयो ,आमा मुस्लिम भएता पनि उनी वैदिक सनातन धर्म प्रति लगाव राख्न थाले । ऋगवेद ,अजुर्वेद ,महाभारत ,रामायण , शिवपुराण , गणेशपुराण अध्ययन गर्न भ्याए भने आफुलाई फिट राख्न व्यायाम तथा योग गर्थे । जेल जिवनमा रहँदा उनले सच्चा साथीभाईको स्मरण गरे ,आफ्नो बुवा र मुवा प्रति उनको माया , सम्मान बढेर आयो । बुवा सुनील दत्त ,आमा नरगिस , बहिनी , साथी कमली अथवा परेश घलानी र श्रीमतीले आफ्नो संघर्षमय जीवनमा साथ दिएको भुमिकालाई स्मरण गर्दै भावुक बन्थे ।
यस्तै युवराज पारस व्याङ्ककमा ११ दिनको कोमामा परेको दिनलाई स्मरण गर्छन् । कोमामा हुँदा उनले आफ्नो आफुबुवा यानी कि राजा महेन्द्र ,ठुलोबुवा यानी कि राजा बिरेन्द्र र अन्य दिवंगत शाही परिवारलाई भेटेको बताउँछन् । उनीहरू आनन्दमय र रमणीय फुलैफुलको बगैंचामा सुखिमय जीवन व्यतित गरिरहेको र आफुले पच्छाउन खोज्दा पालेले धकेलेर पठाईदिएको स्मरण गर्छन् । त्यहाँबाट आफु सुरूङको बाटो भई फुत्त गोकर्णमा निस्केको बताउँछन । तत्पश्चात नै उनको होस आएको हो र उनी बिस्तारै सञ्चो हुँदै आए । तसर्थ यसलाई उनी दोस्रो जीवन पाएको महशुस गर्छन् । तर आफुले पाएको दोस्रो जीवन केको लागि हो भनी बुझ्न आध्यात्मिक तिर लाग्नु पर्छ भन्छन् । जोगि बन्ने र मन्दिर गई पुज्ने भन्दा पनि मनको धीरलाई बुझ्न पर्छ भन्ने आफ्नै तर्क छ । भाइ जस्तो साथी प्रभन्जन बहादुर सिंह चोला फेरेर व्याग्र वेदनाथ बनेपछि युवराज पारसमा गोरखनाथ बारे बुझ्नमा लागे र कर्मनिष्ठ अभियानको जन्म भयो। “क “बाट कलम मा शुरू भएर ज्ञबाट ज्ञानीमा अवसान हुने हाम्रो शिक्षा र दिक्षा यवम पुर्वीय दर्शन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन पर्छ भन्ने न‌ सदैव जोड रह्यो । उनीमा धेरै अध्यात्मिक लगाव देखियो । अभियानको दौरानमा उनलाई भेट्न राम्रो ,आत्मीय व्यक्तित्व , उच्च स्तरिय , बिश्लेसक ,पत्रकार ,बिज्ञ ,पुर्व सुरक्षा अङ्गकाका मान्छे मात्रै नभई नभई लफङ्गा , डन , गुण्डा , हुल्याहा ,कुरौटे ,भरौटे, ड्रग पेड्लर ,जड्याहा , स्वार्थी , लागू दुर्व्सनी तथा अन्य अपराधिक मनोवृत्तिका मान्छेहरू पनि ओईरिन थाले । राम्रो पथमा डोर्याउने भन्दा पनि चयाँखे थाप्ने , ढ्याउ लाग्ने प्रवृतिका मान्छे पनि देखिन थाले ।
शायदै प्रचण्डको पुत्र प्रकाश जनयुद्वकालमा त्यति बिग्रेका र लफङ्गा थिएनन् होला । प्रधानमन्त्रीत्वको पहिलो कार्यकाल भन्दा दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डलाई सोचे भन्दा सफलता मिलेको देखिन्छ । किनभने उनलाई दोस्रो कार्यकालमा उनका छोरा प्रकासको साथ थियो । प्रकाश प्रचण्डको लागि एक कुशल छोरा मात्रै नभई , खारिएको सचिव , व्यबस्थापक , गुरु , राजनितीज्ञ , प्रेरणाको श्रोत , सफल व्यक्तित्व , सम्पुर्णता थियो । तर प्रकाशलाई केही कपटीहरूले ड्रग्स र रक्सिमा फसाई छोडे । उनका नजिक बस्ने र सुरक्षार्थीले नसामा रहने प्रकासलाई एउटा दानवको रूपमा चिन्छन् । उनी नसामा उदण्त हुन्थे रे । प्रचण्डलाई कमजोर पार्न परिवारको दियोलाई नै नसा र रक्सिमा डुवाएर मारे भन्ने पनि छ । जब प्रकाश निभे तब नै प्रचण्डले एमालेसँग आत्मसमर्पण गरे भन्नृमा कुनै द्विविधा छैन । राजा ज्ञानेन्द्रको व्यक्तित्वमा र राजसंस्थालाई आच पुर्याउने कार्यमा कुनै वाक्क लाग्ने ढ्याउले खेलेको छ भन्न सकिन्छ । जब जब राजसंस्था बलियो हुने संकेत देखिन्छ , तब तब युवराज पारसको नया नया औतारी अवतार बाहिरिन्छ । यो अत्यन्तै सोचनिय बिषय छ ।
सञ्जय दत्तलाई जसरी मिडियाले खेदो खनेता पनि मिडियालाई सम्मान नै गरेको देखिन्छ । स्वेता सिंहसँगको अन्तर्वार्तामा आफु र परिवारको मिडियाले जस्तै बिष घोलेता पनि केही तिक्तता नराखि भगवानले त्सता पत्रकारलाई माफि दिउन् भन्छन् । मिडियाले जुनसुकै लेख , समाचार र बिचार पछाडि श्रोत अनुरूप वा प्रश्न चिन्ह राखेर पाठकलाई कन्फ्युजनमा राख्छ त्यसले तिनको जिवनीमा कति असर पार्छ , त्यसलाई नजरअन्दाज गर्छ । सोच्ने हो भने सञ्जयक‍ो लागि निसाफ मरेको भान हुन्छ । बाबुछोरालाई नै आतंकवादीको कित्तामा राखेर मिडीयाले घेरावन्दी गरे पनि आखिरकार अदालतले आतंकवादको मुद्वामा पुर्ण रूपले सञ्जयलाई सफाई दिएर न्याय दिलाउने प्रयास गर्यो । तत्पश्चात ५ बर्षको जेल जिवनमा झण्डै १८ महिना अगावै जेलबाट रिहा पनि भए , सुन्दर आचरणले गर्दा ।
भारतको एजेन्सी र राजसंस्था बिरूद्व चरम रूपले लागि रहेको र नेपालको पार्टी तथा नेताहरूलाई प्रयोग गरिरहेको त जगजाहेर छँदैछ । युवराज पारसले व्याङकक हुँदा आफुलाई केही व्यक्ति वा बिदेशी तत्वले पच्छाईरहेको उजुरी गरेका थिए । त्यस्तै सञ्जय दत्त र सुनील दत्त बिरूद्व केही धार्मिक , साम्प्रदायिक र डनहरू लागिरहेको र सुरक्षाकर्मी बढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरिरहेका थिए । सञ्जय दत्त र परिवारमा साँघातिक हमला भएपछि सञ्जय दत्तले आफ्नो र परिवारको सुरक्षाको निम्ति एके ४७ जस्ता अवैध हतियार राख्न आवश्यकता रहेको देखे ।
दरवार हत्याकाण्ड केही बिदेशी तत्वको उक्साहटमा केही बिदेशी दलाल मिली गरेर उल्टै युवराज पारस र राजा ज्ञानेन्द्रमा दोष थुपार्न लागे । यसका लागि समय समयमा दरवार हत्याकाण्ड छानवीन होस् भनी राज्यसँग पुकारि रहेकाद छन् । उनी आफुलाई त्यो पिडाले कति पिरिरहेको छ र त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी भर्पाई हुने भन्दै प्रश्न गर्छन् । त्यस्तै अर्को घटनामा आफ्नो राष्ट्र र माटो बिरूद्व अन्टसन्ट बोले भनी गिरिजाको ज्वाईँ रूबेल बिरूद्व चितवनमा हवाई फायर गरेको मुद्वा खेप्नु परेको थियो । यता भारत सरकारले सुनील दत्त परिवारलाई सुरक्षाको अनुभुती नदिनु र यता युवराज पारसको सुरक्षा अङ्ग खोस्नु सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई नजर अन्दाज गर्नु नै हो भन्ने नै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
दुवैले आफुद्वारा समाजमा केही गलत संदेश गएकोमा मिडियामार्फत बेला बेलामा माफि माग्दै प्रायश्चित गर्ने गर्छन् । तर त्यहि मिडियामार्फत दुवै व्यक्ति महिला प्रकरणमा बेला बेला फसेको समाचार सुन्न पाईन्छ । हाकाहाकी सञ्जय दत्तले ३०८ जना केटीसँग सम्बन्ध भएको स्विकार्छन् भने युवराज पारस चाहिँ महादेव जस्ता भगवानलाई नै कालीले बसमा राखेको सम्झँदै , तरूणीहरू कहिले काहीँ बाधाको रूपमा आई गाह्रो पार्ने गरेको होकि भन्छन् ।बिडम्वनाको संसारमा प्राय मिडियाले आफु बजारमा बिक्नको लागि यौनकर्मी भन्दा पनि तल्लो स्तरमा नाङ्गिएर समाचार बनाउँछन् भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । कहिले त लाग्छ स्वभाविक समाचार पनि होईन कि क्या हो झैं लाग्छ । तर जे जस्तो भएपनि एउटा सुन्दर परिवारलाई सुन्दर देख्न र रहन नै हामी समाजले हस्तेमा हैंसे गर्न पर्ने कर्तव्य हुन जान्छ ।
संजय दत्तले मुन्ना भाइ एम बि बिएस भन्ने फिल्म सुटिङको दौरान अाफ्नो बुवासँग लिएको जादुको झप्पी साँच्चिकै मन भावुक बनाउने खाले छ । You deserve the better Son , Dad भनेर प्रायश्चित गर्ने सञ्जय दत्तले आफ्नो बुवा सुनिल दत्त ,आमा नर्गिस र बहिनी , श्रीमती र अमेरिकामा बस्ने साथी कमली ( परेश घलानी ) ले आफ्नो जीवनमा खेलेको भुमिका कहिले बिर्सन चाहँदैनन् । अब पनि अर्को जुनी सञ्जय दत्तको न‌ै लिए भने अाफु बिग्रेर परिवारलाई सताएको क्षणलाई कहिले नफर्कियोस् भन्छन् । उनी आफ्नो श्रीमतीले आफु जेलमा रहँदा र आफ्नो नराम्रो समयमा खेलेको भुमिकालाई र आफ्नो बुवाले जिन्दगीको उतारचढाउमा खेलेको भुमिका ,आफुलाई सुधार्न घर सम्पत्ति बेचेको हृदय बिदारक समय कहिले भुल्न सक्दैनन् भने आफ्नो आमालाई बिरामी हुँदा स्याहार गर्न नसकेकोमा अति नै पछुताउ गर्छन् ।
युवराज पारस व्याङ्ककमा हस्पिटलको कोमा पछिको क्षणलाई दोस्रो जुनी भन्छन् र पटक पटक जन्म यहि नेपालमै होस् भन्ने कामना गर्छन् र परिवारका माया र ममतामा सँधै बस्न पाओस भन्ने ईच्छा व्यक्त गर्छन् । आफ्नो मुवा बडामहारानी सरकार शरिरमा गोली लिएर कष्टकर जीवन जिईरहनु परेकोमा भावुक छन् ।
युवराज पारससँग बच्चादेखि सँगै पढेको सहपाठी लामो अमेरिकाको बसाई पछि फर्केर युवराज पारससँग बच्चामा एकसाथ पढ्ने अन्य साथीहरूसँग मिलेर यो विभिन्न नकरात्मक गतिबिधीलाई कसरी चिरेर जीवनलाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने मार्ग खोज्दैछन् । हुन त युवराज पारसले पनि सामान्य नागरिकले जसरि घरपरिवारमा माया ममता पाएका छन् त्यसकै खोजीमा छ झ‌ैं लाग्छ । तर युवराज पारसले आफुलाई संजय दत्तसँग दाँज्दै गर्दा कुछ तो लोग कहेंगे , लोगोका काम हे कहेना , छोडो वेकार कि बातो मे कहि वित न जाए रहेना भन्दै उनले गरे झैं कर्मनिष्ठ भई सत्कर्ममा लाग्न सुझाव दिन चाहन्छु । अन्तमा दुनियाँमे रहेना हे तो काम कर प्यारे , हात जोड सबको सलाम कर प्यारे !
प्रकाशित मितिः सोमवार, कार्तिक १८, २०७६ 3:23:09 PM |
Prevनिर्माणाधीन हाइड्रोपावरको इनलेट सुरुङभित्र पसेका छ जना कामदार सम्पर्कविहीन
Nextनिर्माणाधीन शुरुङमा फसेका ४ जना मजदुर मृत भेटिए